FJKM – Mamio – Teny malagasy tranainy… : hanatanteraka velakevitra Ramaherison Radoarijaona | NewsMada
FJKM – Mamio – Teny malagasy tranainy… : hanatanteraka velakevitra Ramaherison Radoarijaona
Fiaraha-miasa eo amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara sy ny fikambanana Malagasy miombona (Mamio) ho fampiroboroboana ny teny malagasy. Hanatanteraka velakavitra « Ireo teny malagasy tranainy tsy fandre firy intsony ao anaty Baiboly » Ramaherison Radoarijaona (poeta mpiraifaribolana, mpikaroka ireo « very »), ny alatsinainy 4 jona izao manomboka amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro, ao amin’ny fiangonana FJKM Ambatonakanga. “Rehefa noheverina tsara, fironan-tsaina hikaroka ireo “very” no tena tanjona. Izao asa izao no dingana voalohany sy santatra amin’izany ombay mitady ny “very” izany”, hoy i Rado Ramaherison.
Ohatra sady niandohan’ny fikarohany rahateo ny nanehoany fanazavana ny amin’ny teny hoe « nanatsika ». Fehezanteny ao anaty Baiboly: « Ary izy (Petera) nanatsika ny namany, izy teo amin’ny sambokely hafa, mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny, ary nofenoiny ny sambokely roa, ka efa saiky nilentika” (Lioka 5 :7). Ho an’ny Rakibolana Régis Rajemisa Raolison, « manatsika : miantso amin’ny fihetsiky ny loha na tanana ». Ho an’ny Rakibolana Rakipahalalana kosa : « manatsika : miantso na mihaika olona amin’ny alalan’ny fihetsiky ny tanana na koa hoe mamahana basy ».
Nanompanana ny asa ireo teny malagasy tranainy tsy fandre firy intsony ao anatin’ny Baiboly (fanitsiana fahadimy tamin’ny taona 1965). Asa fikarohana nahafahana nanangona voambolana miisa 441. Natolotra indrindra ao anatin’izao jobily faha-50 taona niorenan’ny FJKM (Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara) izao sy ny “Iray volan’ny teny malagasy”.